Ngeke kuvume ngingabuyi ezweni lami: Dkt Ngidi | IOL Isolezwe
Ngeke kuvume ngingabuyi ezweni lami: Dkt Ngidi
Isolezwe / 12 July 2012, 11:21am /
U DOKOTELA Sanelisiwe Ngidi wase Hammarsdale oyocobelela ulwazi esibhedlela sase- Ireland
UZIMISELE ngokubuyela kuleli udokotela osemncane othole ingqayizivele yethuba lokuyosebenza kwezosizo oluphuthumayo phesheya kwezilwandle.
Lapho iningi lodokotela bakuleli kuthiwa ligcwele kwamanye amazwe lapho amadlelo eluhlaza khona, uDkt Sanelisiwe Ngidi (26) waseHammarsdale uthe uthando lwakhe lwezwe lakubo ngeke limvumele akwenze lokho.
Ngeke ahambe ayohlala impilo yakhe kwelinye izwe kodwa uzimisele ukufunda lukhulu kwamanye amazwe.
Uthe ufuna ukubona ukuthi la mazwe angaphandle enza kanjani ukuze agcine ezempilo zisezingeni eliphezulu.
Okwamanje uvakashele e-Ireland ukuyosebenza ezimeni eziphuthumayo esibhedlela i-Letterkenny.
“Ngithe uma ngithola leli thuba lokuvakashela kulesi sibhedlela ngazitshela ukuthi ngeke ngisaliyeka. Ngalo ngizokwazi ukubona indlela ezisebenza ngayo izibhedlela zakwamanye amazwe,” kusho uDkt Ngidi.
Uzohlala e-Ireland izinyanga eziyisithupha kuphela kodwa wethemba ukuthi uzobe esefunde lukhulu lapho ebuya.
Yize umsebenzi wobudokotela kuyinto ayithandayo, uthe akakhulanga efisa ukuwenza.
“Ngize ngaba nesifiso sokuba ngudokotela sengenza u-Grade 10. Umama ongunesi akazange angiphoqelele ukuthi ngingene kulo mkhakha kodwa ubengigqugquzela ukuthi ngingene emkhakheni engibona ukuthi uzongijabulisa,” kusho uDkt Ngidi.
Uthe unina nguye owayembonisa iqiniso ngokusebenza kwezempilo.
Abaningi bazitshela ukuthi kudingeka ukuthi uhlakaniphe kakhulu ukuze uphumelele njengoba kuwumkhakha osatshwayo.
“Ngikholelwa ekutheni akudingeki ukuthi uze ube yisiqengqe ukuze uphumelele ekubeni ngudokotela kodwa kudingeka ukuthi uzimisele futhi ukwazi ukuzibamba,” kusho uNgidi.
Uthe kunokuthi ubeke ubuhlakani bakho phambili kumele uqikelele ukuthi uyazi yini ukuthi uyakuthanda lokhu othi ufuna ukukwenza.
Ekhula wayefuna ukuba nguthisha. Uthe ngesikhathi efuna ukuba nguthisha wayezitshela ukuthi angakwazi ukushintsha impilo yezingane kodwa lesi sifiso sashintsha.
Yize sashintsha isifiso sokufundisa asizange sijike esokuthinta impilo yezingane ezisakhula njengoba ebona engakwenza lokhu emsebenzini wakhe wobudokotela.
Abanye abasuke befuna ukufunda bamiswa wukuthi baphuma emakhaya ahlwempu lapho ingekho imali yokubaqhuba esikoleni.
Uthe ukuphothula kwakhe izifundo zobudokotela kwaba wumphumela wokusebenza kanzima kwabazali bakhe nokuzimisela kwakhe ezifundweni.
Ukhuthaze intsha efisa ukungena kulo mkhakha ngelinye ilanga ukuthi ingabheki lapho iphuma khona.
“Abangabheki izimo ababhekene nazo kepha babuke amaphupho abo. Kumele bazi ukuthi akukho okungenzeki ngoNkulunkulu okunguye osinika amandla okuthi senze lokhu esifisa ukukwenza,” kusho uDkt Ngidi.